Pierre-Emerick Aubameyang: Kabtanka Arsenal wuxuu saxiixay qandaraas cusub oo seddex sano ah - Somgoal
Home Premier league Pierre-Emerick Aubameyang: Kabtanka Arsenal wuxuu saxiixay qandaraas cusub oo seddex sano ah
Kabtanka kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa heshiis cusub oo saddex sano ah u saxiixay kooxda.
31 jirkaan weerarka ka ciyaara ayaa ku soo biiray Gunners bishii Janaayo 2018 wuxuuna ku guuleystay kabaha dahabka ee Premier League xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee buuxa xilli ciyaareedkii 2018-19.
Saxiixida kooxdan gaarka ah weligeed shaki kuma jirin, ”ayuu yiri.
“Waxaan aaminsanahay Arsenal, waxaan kuwada guuleysan karnaa waxyaabo waaweyn, waxaan halkan ku heysanaa wax xiiso leh, waxaan aaminsanahay waxa ugu fiican inuu yahay imaatinka Arsenal”.
Football Daily podcast: Sida ugu fudud ee A-B-G (Aubameyang, Bale, Grealish)
Qandaraaska Aubameyang ayaa dhici lahaa dhamaadka xilli ciyaareedka 2020-21 taasoo la micno ah inuu xor u noqon lahaa inuu la hadlo kooxaha kale laga bilaabo bisha Janaayo.
Weeraryahanka reer Gabon ayaa shabaqa soo taabtay guushii Arsenal ay ka gaartay Fulham Sabtidii, waana ciyaartii ugu horreysay xilli ciyaareedka cusub ee Premier League.
Waxa uu sidoo kale dhaliyay labo gool kulankii Chelsea ee finalka FA Cup bishii July, isagoo xaqiijiyay booskii Gunners ee xilli ciyaareedka soo socda Europa League.
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa yiri: “Muhiim ayey u ahayd Pierre-Emerick inuu nala sii joogo.
“Waa ciyaaryahan heer sare ah oo leh maskax aan caadi aheyn. Ahaanshaha ciyaaryahanka inuu qaato waqtiga ugu yar si uu u gaaro 50 gool kooxdan ayaa kuu sheegeysa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato isaga iyo qaabkiisa shaqo.
Waa hogaamiye muhiim u ah kooxda qeyb weynna ka ah waxa aan dhiseyno, wuxuu doonayaa inuu halkaas la joogo ciyaartoyda ugu fiican adduunka isla markaana uu ka tago raadkiisa. Halkaan ayuu ku gaari karaa ”.
Tan iyo markii uu ku soo biiray Arsenal, rikoorkii kooxda ee markaas £ 56m, Aubameyang wuxuu dhaliyay 72 gool 111 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan. 86 kulan oo uu saftay Premier League wuxuu dhaliyay 55 gool wuxuuna sameeyay 12 caawin.
Ciyaaryahanka sanadka ee Afrika ee sanadka 2015 ayaa kabtan loo dhigay bishii November ka dib markii ciyaaryahanka khadka dhexe Granit Xhaka laga xayuubiyay doorka Arteta kii ka horeeyay Unai Emery.
Xagaagan kooxda Arsenal ayaa kula soo saxiixatay daafaca reer Brazil Gabriel Magalhaes aduun dhan 26m euros (£ 23.14m) oo ay kala soo wareegeen kooxda Lille, waxaana ay la soo wareegeen weeraryahankii hore ee kooxda Chelsea Willian oo si bilaash ah kula soo saxiixday waxayna dib ula soo saxiixdeen Dani Ceballos oo ay amaah kaga soo qaateen Real Madrid.
Arsenal iyo tababaraha Mikel Arteta waxay doonayeen inay ganacsi badan sameeyaan xagaagan – laakiin hal macaamil ayaa ka miisaan iyo miisaan weyn kan kale.
Taasina waxay ku heshay magaca Aubameyang qandaraas cusub oo waqti dheer ah.
Waa la isku raacay in muddo ah laakiin taageerayaasha Arsenal ayaa hadda si fudud ku nasan kara in weeraryahankan, oo ku guuleysta kulamada waa weyn isla markaana xubin ka ah shaqsiyaadka ugu caansan booskiisa, haatan la saxiixay oo la shaaciyey isla markaana ah shakhsiga udub dhexaad u ah dib u dhiska Arteta ee garoonka Emirates.
Dhammaan hay’adaha la cusbooneysiiyay, anshaxa iyo xushmadda Arteta waxay keeneen Arsenal tan iyo markii uu yimid bishii Diseembar, inta badan xawaaraha ayaa lumi lahaa haddii Aubameyang uusan mustaqbalkiisa u ballan qaadin kooxda.
Aubameyang, dhamaan awoodaha kale ee kooxda Arsenal, waa ninka sameeya farqiga weyn sida lagu cadeeyay labo gool labadii ciyaar ee semi-finalka FA Cup ee ay ka badiyeen Manchester City ka dibna finalka ee Chelsea.
Wuxuu sidoo kale muujiyay kalsooni weyn iyo kalsooni waxa uu Arteta doonayo inuu ku gaaro Arsenal – marka waa maalin mudan in loo dabaaldego Gunners
Previous articleCiyaarta qiimaheedu yahay £100 Million oo maanta dhacaysa